nepali congress BP(nepali congress BP) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
nepali congress BP
पोखराको एक रिसोर्टमा पूर्वराजा र वीपी कांग्रेसका नेताबीच गोप्य भेट, के भयो कुराकानी ?
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस(वीपी)का केही वरिष्ठ नेताहरुले सोमबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गोप्य भेटघाट गरेका छन् । कांग्रेस वीपीका महामन्त्री सुशीलमान शेरचन नेतृत्वको समूहले पोखराको एक रिसोर्टमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग ४५ मिनेट लामो भेटघाट र छलफल गरेको हो। सो क्रममा कांग्रेस(वीपी)का नेताहरुले पूर्व राजा शाहसँग हिन्दू...
वीपी कांग्रेस र राप्रपा राष्ट्रवादीबीच एकता चाँडै, एकीकृत पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न समिति गठन
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस वीपी र राप्रपा राष्ट्रवादीबीच पार्टी एकीकरणको छलफल तीव्र बनाइएको छ । यी दुई पार्टीले संसदीय निर्वाचनकै बेला बानेश्वरमा एक संयुक्त आमसभा गरी पार्टी एकीकरण गरी राष्ट्रवादी शक्तिको मोर्चा बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणालाई मूर्त रुप दिन दुई पार्टीले केही दिनदेखि एकीकरणको छलफललाई तीव्र पारी ठोस...
अन्तर्वार्ता ►सुशीलमान शेरचन, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस(वीपी) स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नदेखिएको(नसुनिएको) नेपाली कांग्रेस वीपी पनि चुनावी मैदानमा छ । तपाई आफैं पनि कांग्रेसबाट मन्त्री बनिसक्नुुभएको व्यक्ति हो । अहिले आएर छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो ? -नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाबाबुु रहुञ्जेल एउटा लहर थियो ।...
काठमाण्डौ । ‘सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने, रोएर कराएरै भए पनि सत्तामै टाँसिरहनुुपर्ने ! सत्तामा बसेपछि जनता बिर्सने, छोरी ज्वाइँ, भाञ्जाभाञ्जी र सम्धीहरुको मात्र हित हेर्ने । यस्तो पनि कांग्रेस हुन्छ ?’ कुनै बेला नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भइसकेका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रिय सुशीलमान शेरचनले नयाँ बानेश्वरस्थित संसदभवन...
प्रकाशमानलाई कांग्रेस वीपीले चिप्ल्याउने डर, देउवाले मिलाउन खोज्दा झन् बबण्डर
काठमाण्डौ । बाम गठबन्धन र विवेकशील साझा पार्टीको कडा टक्कर व्यहोरिरहेका कांग्रेसका युवा नेता प्रकाशमान सिंह नेपाली कांग्रेस वीपीको उम्मेद्वारले पनि टक्कर दिन थालेपछि अत्तालिएका छन् । हरिवोल भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको कांग्रेस वीपीले पार्टीभित्रको असन्तुुष्ट मत बिस्तारै आफूतिर आकर्षित गर्न थालेपछि आफ्नै पार्टीका क�...
ब्लुक्रस हस्पिटलमा ग्लोबल बैंकका ग्राहक र कर्मचारी विशेष छुट पाउने
जनता अवकाश कोषका सञ्चयकर्ताले बोनस पाउने, सुत्केरी स्याहार र काजकिरिया खर्च पनि
पहिलो महिला ब्रोकरको मृत्यु बिमा दाबी भुक्तानी एक महिनामै !